Izay Hitranga Rehefa Mampiaraka ny Lehilahy Shinoa
Folo taona lasa izay, ny drafitra ho tonga any Shina tafiditra fampianarana ho an’ny isan-taona, roa. Angamba aza telo, talohan’ny niverenany tany ETAZONIA izy mba hanomboka ny fampianarana asa. Mampiaraka dia tsy anjara ny drafitra, ka raha izany no nitranga, izaho dia tanteraka tsy mbola vonona ny ho azy. Rehefa manao jery todika aho dia efa tia hahalala izay aho no nahazo ny tenako aho ho any na, fara fahakeliny, ny sasany torohevitra momba ny fikarohana Shinoa mampiaraka ny kolontsaina. Satria ny zava-nitranga dia voafetra fotsiny ny vadiko aho, dia nahazo ny sasany fanampiny torohevitra avy amin’ny Amerikana roa mpitoraka blaogy monina any Shina: Jocelyn Eilenberg manoratra Miresaka ny Shina sy Jo Kelly-Bai manoratra ny Fiainana ao Ambadiky ny Rindrina.
Sinoa ry zalahy, amin’ny fanerena avy amin’ny ray aman-dreny sy ny ho avy, avy amin’ny kolontsaina hafa ny mampiaraka,-sy-be daty hanambady. Be loatra izany, fa ny vadiko tsy manontany ny daty ahy, dia nangataka ahy izy mba ho niaraka taminy nandritra ny androm-piainany. Raha oharina amin’ny ankamaroan’ny ny Tandrefana namany, Sinoa ny olona dia manomboka mieritreritra momba ny fanambadiana aloha be tao amin’ny fifandraisana. Noho izany, raha toa ianao mampiaraka ny lehilahy Shinoa, ho azo antoka vao hahalala izay ny samy te-avy amin’ny fifandraisana ka afaka mitantana ny fanantenanao. Efa nandre tantara avy amin’ny faharoa-tanana ny loharanom-baovao momba ny vehivavy Shinoa te daty mba hahazoana tsara ny teny anglisy izany na mahazo karatra maitso. Rehetra ny vehivavy Shinoa fa efa manambady Tandrefana ny olona izay fantatro efa niverina tany an-tranony firenena taoriana ny fampakaram-bady. Saingy tsy mba miteny Shinoa rehetra ny vehivavy mitady tapakila avy ao Shina. Fotsiny izy ireo dia toa mba hisokatra kokoa ny hevitra ny handao. Mifanohitra amin’izany aza, Sinoa ry zalahy izay daty Tandrefana ny vehivavy, mazàna ny hijanona ao Shina. Ampahany ity dia avy ny adidy mba hikarakarana ny be taona ny ray aman-dreny sy raibe ary renibe anareo. Koa, izany dia mora kokoa ho azy ireo hanohy ny asa eto, indrindra fa raha ry zareo no ho miakatra ary efa voaorina ny asa. Maha-maimaim-poana amin’ny teny anglisy ny lesona, na dia izaho sy ny vadiko ihany no mifandray amin’ny teny anglisy, fantatro fa maro ny mpivady izay miteny Shinoa satria ny olon-tiany na ny vadiny dia tsy miteny ny tenin izany. Avy amin’ny zavatra niainako, fara fahakeliny, mifanohitra amin’ny ny sasany ny fitsarana an-tendrony, ny fahazoana maimaim-poana amin’ny teny anglisy ny lesona toa tsy ho lehibe laharam-pahamehana ho azy rehefa mampiaraka Tandrefana. Amin’ny ara-pianakaviana amin’ny fivavahany, ampianarina any an-tsekoly amin’ny voalohany-kilasy, nahita aho fa ny Sinoa olon-dehibe handray ny ray aman-dreniny’ ny teny tena zava-dehibe. Jocelyn ankehitriny ray-in-lalàna, nilaza ny zanako lahy fa izy dia handray ho namana amin’ny Tandrefana ny vehivavy fa tsy mba daty azy. Ity dia tsy maintsy efa lehibe letdown ho azy, fa soa ihany fa ny fitiavana dia avy. Ny vady ny ray aman-dreny foana milaza amintsika ny tokony hatao, tsy atao, ny fomba hanaovana izany sy toy izany araka ny tokony ho izy sy ny fomba hitaizana ny ankizy. Angamba, hihaona ny olon-tiako raha ianao samy ao amin ny tanàna toy ny ankamaroan’ny olon-droa atao, fa maro ny Shinoa mpivady mipetraka sy miasa ao amin’ireo tanàna maro samihafa. Ny anabavy-in-lalàna sy ny vadiny nandritra ny fotoana rehetra ny fiarahana sy ny efatra voalohany taona ny fanambadiana mipetraka any amin’ny tanàna hafa, dia ny firenena aza, noho ny asa. Farafaharatsiny ny antsasaky ny ankizy aho mpitaiza ihany no mahita ny dada indray mandeha isan-taona noho ny izany.
‘Izany fomba izany,’ ny valiny izay ny ankamaroan’ny olona manome
Ny fahafahana hahazo vola bebe kokoa matetika dia be karama kokoa noho ny mijanona ao an-trano. Tsy fantatrareo fotsiny ny fomba mahazatra izany dia rehefa isika no niaraka, ary nahazo tsara vintana sy ny hita ny lehilahy fa tiany hijanona akaiky an-trano. Ny in-droa izy no omena ny safidy ho any Inner Mongolia, ary telo ny fidiram-bola, dia nivadika ho azy teo. Tao anaty lahatsoratra tao amin’ny bilaoginy, Miteny Shina, Jocelyn mampahatsiahy ny tantaran’ny Sinoa mpamily fiarakaretsaka izay nilaza taminy fa izy tsy afaka hanome fahafaham-po ny filàn’ny vahiny vehivavy teo aloha ny fifandraisana.
Hafa ny tsy fandriampahalemana dia vola
Sinoa matetika ny olona mihevitra fa ny Amerikana dia manan-karena ary tsy afaka ny tsy hanome antsika ny kely karama. Raha oharina ny fomba ny vadiko nihalehibe tao aorian’ny Revolisiona ara-Kolontsaina Shina, ny trano tsotsotra nihalehibe tany dia ny trano. Izy foana ny karama amin’ny daty, fa raha nanana fahafahana hahazo ny fikarohana navoakan’ny sasany professional gazety sy tsy manam-bola ny saran’ny, izy dia tena misalasala hanaiky ny vola avy amiko. Jocelyn nilaza fa ry zalahy fa izy no mitondra ny datin ny mbola tsy nivoaka mivantana mba hanehoany ny finiavana. Ry zareo miadana sy mandany fotoana be dia be ny sms sy ny resaka, mampiseho ny miahy anao. Ny firaisana ara-nofo tonga tsara tarehy tsikelikely raha ny bandy dia lehibe momba ny mampiaraka. Ny vadiko, ary na dia tsy mihazona ny tananao mandra-ny fahadimy sa fahenina daty, ary ny oroka voalohany dia maro daty rehefa afaka izany. Na dia Hollywood ny azontsika ny antsika vehivavy Amerikana dia nalain’i Shinoa midika fa isika rehetra ‘misokatra saina’ (midika hoe manana ny lisitry ny fifandraisana taloha izay isa ny avo roa heny, na dia misokatra ho ny alina iray mijoro) ny bandy mendrika nanenjika ny fifandraisana dia manaja ny sisin-raha toa ka mazava tsara sy upfront amin’ny azy ireo. Ny iray tamin’ireo zavatra voalohany voamariko momba ny tanora ry zalahy ao Shina fa izy ireo dia saika mandrakariva, mitondra ny olon-tiany ny kitapom-bola. Izany karazana hafahafa mba zatra nahita maro ry zalahy amin’ny endrika handbags eo amin’ny sandriny, fa toa manao izany an-tsitrapo. Rehefa nanontaniako ny vadiko ny momba izany, hoy izy, dia izy no tsy nahatsikaritra izany. Avy amin’ny fandinihana, izany dia mitranga eo anivon ny mahery sy intsony toy ny ataon’ny tanana mihazona araka ny mpivady dia manana zaza. Tsy mbola nanontany ny vadiko mba hitondra ny kitapom-bola fa aza mankasitraka fa mbola mihazona ny tanako ihany, na dia rehefa afaka roa ny ankizy. Izay ny momba izany noho ny fomba fijery amin’ny fiarahana Shinoa ry zalahy. Ity lahatsoratra ity dia tsy handeha mba hanomana anareo zato isan-jato ho an’ny Shinoa mampiaraka zava-niseho, fa izy ireto no zavatra sasany aho no fantatry ny fony vao nanomboka niaraka vadiko. Dia misy zava-tsy nampoizina ato amin’ity lahatsoratra ity ianao tsy mahafantatra. Efa tsy nanana na inona na inona traikefa niaraka ny Shinoa olona? Mizara amintsika ny zavatra niainany tao amin’ny fanehoan-kevitra. CHARLOTTE EDWARDS-ZHANG tonga tao Shina mba hampianatra teny anglisy ny avo-ny sekoly ireo mpianatra tao amin’ny tanàna kely iray. Taona maro taty aoriana, izy no fiaraha-monina, na ny avy any ivelany ny vadiny. Izy no amidy ao amin ny lesona mikasa freelancing, ary dia miezaka ny hifehy ny zava-kanto ny nahandro Shinoa sy, angamba, mitondra fiara ao Shina. Ny karazana feo isa isaky ny pinyin izy avy eo tsindrio ny niova fo ny bokotra hanova azy amin’ny feo marika
Ahoana no hahatonga ny antso maimaim-poana amin'ny aterineto tsy misy ririnina firaketana an-tsoratra →